Ụgbọ ala ụgbọala na Namibia
Njem nleta Afrika
Iji hụ ihe niile mara mma na Namibia , ọtụtụ ndị na-ahọrọ ịzụta ụgbọ ala, nke na-enye ha ohere ka ukwuu na ịgagharị na mba ahụ. Iji gaa na mbara ọzara Namib , gaa na Skeleton Coast , dina n'ụsọ osimiri na Caprivi ma ọ bụ hụ ọmarịcha azụ osimiri Fish River - nke a ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na ị kpọtụrụ otu n'ime ụlọ ọrụ mgbazinye ụgbọ ala dị na "mpaghara ojii".
Kedu ụgbọ ala m ga-ahọrọ maka njem m na Namibia?
N'ihi eziokwu ahụ bụ na okporo ụzọ n'okporo ụzọ na-ahapụ ihe dị ukwuu ka a chọọ, nhọrọ kacha mma ga-akwụ ụgwọ ụgbọala SUV. Ọnụ ego mgbazinye nwere ike ịdị iche iche na-adabere n'ụdị "ejuputa" maka ụgbọ ala ahụ. N'elu arịrịọ nke onye ahịa ahụ, onye na-eme atụmatụ njem ogologo oge, igwe nwere ike ịkwado ya:
a gas cylinder na ọkụ;
akpa ihi ụra;
abụọ wiil abụọ;
Onye na-egwu GPS.
Ụlọ gas na Namibia
Ịga n'ebe dị anya gafee obodo ahụ, ị ​​ga - eji mmanụ ọkụ ọzọ na - eburu gị, ọ bụ eziokwu na mmanụ aṅụ ahụ bụ nke ọma. E nwekwara ụlọ ọrụ ndị ọrụ ụgbọ ala ga-enye ọrụ dị mkpa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa.
Ụfọdụ atụmatụ nke ije na Namibia
A na-eji usoro aka ekpe ekpepụta ala ahụ. A gaghị echezọ nke a maka nke abụọ. Ọ bụ ezie na njem a adịghị dị ka ndụ dị ka na Europe, ọ ka na-atụghị anya nke ọma. Tụkwasị na nke a, a ghaghị ịhụ iwu ndị a nakweere na mba Africa a:
mkparịta ụka na ekwentị mkpanaaka mgbe ị na-ebugharị n'okpuru iwuchi;
n'ihi imebi nke ọsọ, onye ọkwọ ụgbọala na-eche ihu ọma;
onye na-akwọ ụgbọ ahụ na ndị njem niile, ma ọ bụrụ na ọ bụghị otu, ga-ejiri eriri oche;
n'èzí n'obodo ahụ, mgbe ọ na-agagharị, mgbe ị na-agagharị na ọdọ mmiri, n'ọzara ma ọ bụ na ọhụụ na-adịghị mma n'ihi ihu igwe, ọkụ ọkụ ga-agbanye ọkụ;
na-agafe agafe n'ihu njem a na ekpe;
A machibidoro iwu ịkwọ ụgbọala na akwara ma ọ bụ ịṅụbiga mmanya ókè.
Iwu maka ịgbazinye ụgbọ ala na Namibia
Na ị na-enweghị nsogbu ọ bụla e nyere mkpịsị ugodi maka ụgbọ ala, ọ dị mkpa ka ịdebe iwu ndị a chọrọ iwu:
afọ nke onye ọkwọ ụgbọala ahụ site na afọ 22 (ahụmahụ ụgbọala na-erughị afọ 3) ruo afọ 70;
enwere ikikere nke ọkwọ ụgbọ ala zuru ụwa ọnụ na iwu mkpuchi.
Na mgbakwunye, iji gafee ókèala nke obodo dị nso (Angola ma ọ bụ Zambia), a chọrọ iji gosi akwụkwọ mgbazinye, yana ọkwa ụgbọ mmiri na ụgbọ ala; banyere ebumnuche ị gafere ókèala, ị ga-agwa ụlọ ọrụ ahụ n'oge ịbanye akwụkwọ.
Ọsọ ọsọ na okporo ụzọ Namibia
N'agbanyeghi na ụzọ uzo di na mba adighi adi otutu, iwu nke ime ngwa ngwa bu ihe kwesiri ekwenye nye onye obula obula:
na mpaghara, ọsọ ekwesịghị iga 60 km / h;
n'èzí obodo ahụ onye ọkwọ ụgbọala nwere ike mee ka ụgbọ ala ahụ dị ngwa 100 km / h, ma ọ bụrụ na àgwà nke ụzọ ahụ na-enye ya ohere;
na autobahns na-agba ọsọ ọsọ na-ekwe ka 120 km / h.
Ihe ngosi okporo ụzọ na Namibia
Ihe ịrịba ama na ihe ịrịba ama na Namibia dị iche na nke anyị, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọtụtụ. Ya mere, tupu ị banye n'azụ ụgbọ ala na mba ọzọ, i kwesịrị iji nlezianya na-amụ ha:
ihe mgbachi akara, acha anụnụ anụnụ;
ozi bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ;
Ihe ngosi nke ihe ize ndụ na-ese na-acha anụnụ anụnụ ma nwee ụdị triangle;
Ihe eji acha uhie uhie ma na-acha uhie uhie na okwu okporo ụzọ banyere ebe ịgbaba iwu;
agba akara edo edo na nke ọcha na-enye ohere ịgba mgbochi oge dị mkpirikpi;
ihe ịrịba ama ịdọ aka ná ntị na-egosi na n'èzí obodo kwesịrị ịkpachara anya, dịka ụzọ na-agakarị anụ ụlọ na anụ ọhịa.
Ụgbọ njem na South Africa
Ụdị nke Etiopia
Kenya ma obu Tanzania - nke ka mma?
Cuisine nke Tanzania
Namibia - ọdụ ụgbọelu
Ntube National Park nke Namibia
Kedu ihe ga-esi Morocco?
Nri nke Namibia
Namibia - Ebe nhazi
Kedu ihe ị ga-esi na Namibia?
Ememe na Madagascar
Ọwa oriọna ọhụrụ-ụlọ
Cefotaxime - injections
Nke mbụ, nke abụọ ma ọ bụ nke atọ - nwere mmetụta dị iche
Ime ụlọ-ime ụlọ - atụmatụ na atụmatụ mkpochapụ
A na-ekiri grey
Na-asacha robot na-ehicha ihe
E jidere Julia Roberts n'enweghị uwe ogologo
Agba nke pantyhose egusi
Uwe ejiji na enyo
Gini mere nrọ nsi oji?
Kedu mgbe nwa ọhụrụ ahụ malitere ịkwaga?
Ebe mgbaba Bukovel, Ugwu Carpathian
Egwú maka ụmụ amụrụ ọhụrụ
Mmiri protein n'ụlọ
Ụlọ Royal Opera
Kọmputa nhazi nchekwa kọmputa
The Library Library
Dakota Rose na-enweghị etemeete
24 ọnọdụ ndị mmadụ na-agaghị aghọta
Akuku nchekwa na ụlọ akwụkwọ ọta akara